Duofold ® ပေါင်းစပ်ထုပ်ပိုး
Duofold အမှန်တကယ်ထူးခြားတဲ့အမြင်အာရုံအထုပ်ထုတ်လုပ်ရန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း, သေတ္တာ-grade ကိုပလပ်စတစ်နဲ့ paperboard ရဲ့အကောင်းဆုံး attribute တွေပေါင်းစပ်သည်။ နှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသော, အမြင်အာရုံ texture နှင့်ထိတွေ့နိုင်သောဆွဲဆောင်မှုပေးနေချိန်မှာအဲဒီနှစျခုထပ်တူထပ်မျှအလွှာကိုပေါင်းစပ်ပြီးအချို့သည်အလွန်ထူးခြားတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဒီဇိုင်းဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
soft တွန့် ® တင်းကျပ်ရုပ်ရှင်သမားရိုးကျ windowed paperboard ပုံးကြောင့်ဝေး သာ. ကြီးမြင်ကွင်းခွင့်ပြု, မျိုးစုံပလပ်စတစ်သေတ္တာပြားကိုဖန်တီးရန်သို့မဟုတ်မျိုးစုံရမှတ်လိုင်းများန်းကျင်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုထုပ်ပိုးပြီးလုပ်အသုံးပွုနိုငျသွင်းယူခဲ့ကြပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, အတင်းကျပ်ရုပ်ရှင်ပေါ့ပါးပြတင်းပေါက်ရုပ်ရှင်ကို အသုံးပြု. ဖြစ်နိုင်ထက်အများကြီးပိုကြီးတဲ့ပြတင်းပေါက်ခွင့်ပြုသမာဓိနှငျ့ခှနျအားကထပ်ပြောသည်။
ထိုအပင်ထက် သာ. ကြီးမြတ်သောကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းသက်ရောက်မှုများအတွက်, offset, flexo နှင့် / သို့မဟုတ် silkscreen ပုံနှိပ်ခြင်း, ပေါင်းသတ္တုပါး, စိုင်းနှင့်အခြား decorating အထူးသက်ရောက်မှုမဆိုပေါင်းစပ်, ဖြစ်စေပလတ်စတစ်သို့မဟုတ် paperboard ပြားမှလျှောက်ထားခြင်းသို့မဟုတ်နှစ်ဦးစလုံးနိုင်ပါသည်။
Duofold ဗီဒီယို Watch